Arabian Umhla kwi-Intanethi amalungu – Uphendlo Arab icacile yi-parameters inzala
Ezisebenzayo kunye nothando-nako kubekho inkqubela. Ndinako kubonisa ubomi kuyo yonke imibala. Ingaba uyazi ukuba kutheni. Ngenxa Yokuba Mna kusasa kakhulu eyobuhlobo, optimistic, esebenzayo isoloko ikulungele zisa ncuma kwi umntu ke ubuso. Ukukhangelwa ukunceda abasweleyo. Ndiya kuba ndonwabe kuphela ukuba kukho ndonwabe umntu olandelayo kum. Ndinguye bathambe, zalo lonke udidi, elinovakalelo, mna hate lies kwaye hlawulela. Mna kufuneka ukuba ube kunye eyobuhlobo nangona ngaphandle ubomi end. Molo, ndiza umfana Moroccan kubekho inkqubela Iphelelwe, ndiza a kubekho inkqubela ngubani nomonde, romanticcomment, ezinzima kwi-budlelwane nabanye, ndithanda intlanganiso abantu kwaye yenza entsha acquaintances ngenxa yokuba kuya kuvumela kum kuba abahlobo abaninzi abathembekileyo, Emva ndifumana ukwazi abantu ngcono kwaye ndiqinisekile ukuba ngaphezulu relaxed jikelele kwabo, ndivula phezulu kwaye ndiqinisekile ukuba iselwa a funny kwaye fun umntu. Ndiza pretty imdaka minded kwaye sarcastic wam humourism kakhulu ukuqonda umntu. Ndiya kusoloko ubeke ngokwam kwi-omnye umntu ke, izihlangu kwaye uzame ukuqonda oko. kukuvakalelwa, benza ntoni ukuba ucinga kwaye apho zivela. Mna zama ukuba zange abe judgmental kwaye oko kunika abantu yoncedo ye-ukuthandabuza. Ndiza omhle kakhulu umhlobo. Ndiza kusoloko kukho kuba bahlobo bam, ilungele mamelani, kunika ingcebiso kwaye uncedo. Dibanisa, ndiza eyona imfihlo-keeper ehlabathini. Ndiqinisekile wonke inkangeleko unje a ichaphazela ka-incwadi kwaye ndifuna ukwenza wam-a beautiful omnye. Kanjalo, ndiqinisekile i-ubuhle ka-umfazi ayikho a facial indlela, kodwa inyaniso ubuhle ngu olubuyiselweyo yayo umphefumlo. Ngumsebenzi esinenkathalo ukuba yena lovingly inika passion ukuba yena ibonisa. Abo ndinguye.? Ndingumntu firework, mna uthando oqaqambileyo imibala, andinguye besoyika ukuba ibe oqaqambileyo ndawo kwi ngwevu indimbane kwaye mna hayi yintoni abanye abantu yokucinga kum, andinguye ukuzama impress nabani na. Ubomi kakhulu elifutshane ukwenza nantoni na ngaphantsi ukuphila ngayo kwi-fullest kwaye uyakuthanda wonke ngomzuzu. Bam big dibanisa ngu-bam ncuma. Ndinguye kakhulu cheerful, kakhulu optimistic.
Mna appreciate uhlobo kwaye honest abantu, mna hate xa umntu lies kum. Ndinguye vula abantu, kwaye mna ixabiso okulungileyo unxibelelwano. Ndinguye kakhulu elula kubekho inkqubela kwaye ndithanda elula iimboniselo. Ndinguye ezinzima kwaye honest nge romanticcomment uphawu, ndiza umntu olilungu amatsha na ethe-ethe, considerate, uhlobo kwaye clever. Ndibathanda ubomi kwaye uyakuthanda ulonwabo ke inika kum kwaye bahlobo bam wathi ukuba ndingumntu kubekho inkqubela ngubani sensible ukuphila kodwa rational ukuba umthetho. Xa ndiphakathi elona nani liphantsi incopho yobomi bam, ndaqonda ukuba ubomi kuphela sele elinye ithuba kwaye simele cherish ubomi bethu. Mna ithemba lam matrimony iya kuba icacile kwaye ndonwabe, kodwa ndinako share yonke into kunye umlingane wam nkqu andwebileyo iimboniselo ukuba mna ndikuye uthando lokwenene. Ndinguye vula kuba ubomi kwaye ndifuna ukuba bonwabele ubomi bam. Ndinguye i-kulula-ke umfazi lizele passion kwaye affection. Ufuna kum ukuba wabele abanye nawe?) Ndibathanda socializing kunye abantu. Ngexesha elinye, ndinguye romanticcomment amatsha na ethe-ethe. Ndibathanda yolwandle kwaye resting. Ndibathanda outdoors kakhulu. Kwakamsinyane njengoko owakhe usapho iya kuvela kum, ndiya kuba happiest umfazi kwi iplanethi. Yintoni endinokukwazi kuthi malunga ngokwam? Ndinga bathanda ukuthi ezona zinto, kodwa mhlawumbi ndim mistaken. Ukwazi umgwebi yi-ngokwakho kuphela. Ukufundisa kum, nindifumane, ukuphonononga kum. Kwaye uza kufumana nethuba babe a happiest umntu ehlabathini. Ndine kakhulu sithande kwaye uhlobo entliziyweni. Mna zama ukwenza wam eyona rhoqo. Andiqondi njenge nokukhalaza malunga ubomi bam, mna funeka nizame ukwenz kukwenza ngcono. Mna kuba eshushu intliziyo, bahlobo bam rhoqo ndiyazi ukuba ndiya uncedo kwabo ukuba babe kufuneka wam uncedo. Ndiya kusoloko bekholelwa izinto ezilungileyo.
Mna zama ncuma ngakumbi
Kwaye mna ngenene uyakuthanda ukwenza ezinye abantu ndonwabe. Andiyazi abo njenge elula kubekho inkqubela ngathi kum. Mna ke ubeke wam bhanyabhanya apha. Uza kubona indlela elula ndinguye. Ndicinga ukuba ndiza elula kubekho inkqubela, enyanisekileyo, ukwazi ukuba sithande kwaye kuba wamthanda. Ndinguye kakhulu vula-minded umntu, Kakhulu zolile kwaye lovable umntu. Ndinguye rhoqo abathembekileyo, honest kwaye ngqo. Mna kufuneka thembeka abanye kunye ngokwam, uhlobo kunye noxanduva. Eyona umgangatho wam indalo ke mna-restraint. Ndiya kusoloko zama ukuqonda abantu, kwaye kuphela ngoko ke yenza info rich. Mna zama ukubona kuphela okulungileyo kwaye optimistic malunga ubomi. molo mhlekazi njani ingaba ndithanda red kwaye pink. Ndithanda elide drive kwi-car. Kwaye ndithanda entliziyweni emsulwa umntu kwi-ukukhangela ukuba phaya. kwaye ndim lokulinda elizayo iqabane lakho. kwaye ndithanda (ezikhethekileyo i-american boys) kwaye Usapho boys kanjalo ndithanda kuyo.
Ndithanda UK kunye NATHI
Ndinguye thambileyo uphawu kwaye ngamanye nomsindo. Ndibathanda abahlobo.i-ndibathanda ezincinane abantwana. Ndibathanda teddy ubungqina. kwaye mna uthando ukuba akunyanzelekanga ukuba ndiyinqaye. romanticcomment kwaye jones amaxwebhu. kwaye mna uthando iincwadi ukufunda guys ndifuna uthando kuwe Ngexesha mna appreciate ubuhle kuzo zonke iintlobo zobomi, ndibe nento yokuba ikhethe ekubeni intellectually engaging iincoko kunye abantu ndiya kuhlangana. Ubomi elifutshane, ndiza ukuthandaza kuba umphefumlo wam mate, bazalwana lifetime companion ndinguye kakhulu nomonde, abathembekileyo, energetic young elonyuliweyo. Ndivela ingozi enkulu usapho kwaye ndiyazi njani care njani ukuba ungabelana ngantoni. Ndinguye ilungile ukunika kodwa, kunjalo, ndinga uthando ukuthatha efanayo emva – uthando, care, ububele, warmness. Ndingumntu kakhulu loyal kwaye uhlobo umntu.
Wam uphawu ilungileyo
Ndinguye kakhulu flexible kwaye vula ukuba kukho into entsha. Ndinguye kakhulu komhlaba umntu ngokwemvelo. Ndithanda ukufunda izinto ezintsha, nokufumanisa entsha horizons kwaye nje ukuba bonwabele ubomi. Mhlawumbi uza ukungena kwam. Ndinguye ezizolileyo, balanced kwaye ngexesha elinye esebenzayo umntu kunye kakhulu engqondweni kwaye okulungileyo uluvo humor. Ndiyazi ukuba ubomi ayi kuphela fairytale kunye iintyatyambo kwi-wonke iindlela, andinguye ukukhangela prince kwi-mhlophe horse. Njengoko mna ndithanda isempilweni ubomi isimbo, ndithanda isebe lemicimbi yenkcubeko nemidlalo kwaye handmade ukutya
I-dubai girls - hotel kwaye club uluhlu - Ukufumana Inyaniso Uthando →